Desambra 13, 2011 amin'ny 3:05 am
“Dikanteny rehetra Posts” bokotra esorina amin'ny toe-javatra transposh rafitra ao amin'ny WordPress 3.3!
manamboatra izany no sitraky
Desambra 13, 2011 amin'ny 3:12 am
Tsia mihitsy, any amin'ny efijery safidy teo an-tampon'ny ny pejy, ary ho azo antoka tsanganana roa no nofantenana.
Desambra 13, 2011 amin'ny 4:34 am
New dika manampy Meta iray hafa danja samy nadika pejy. Izany miaro milina fikarohana avy tsy nirakitra anarana izany (Tsy fantatro hoe nahoana).
Mba hijery izany.
Desambra 13, 2011 amin'ny 4:39 am
Miala tsiny, izay mety tsy ho ny antony. Fa noho ny antony hafa, translated pages are not getting indexed 🙁
Desambra 13, 2011 amin'ny 8:14 am
Raha ny fantatro nandika pejy hatao indexed. Ny toerana Transposh fitaovana Webmaster mampiseho ny tahan'ny ~ 98% amin'ny pejy ho indexed, ary izany no miaraka amin'ny ny fanekena ny Sitemap XML izay ahitana fiteny rehetra. Mety kokoa ny vintana ny rehefa pejy nadika amin'ny alalan'ny fampiasana ny saina Widget, na fandefasana ny marina Sitemap, Google dia afaka ihany koa ny mampiasa ny tenifototra Rel nanampy ny pejy, fa izany no tsy azo antoka.
Desambra 16, 2011 amin'ny 12:18 am
Nahita ihany no afa-po amin'ny sitemap.xml anglisy (XML-Sitemap Gen 3.2.6) . Ahoana ny mampiditra afa-po amin'ny fiteny maro izay “mandika rehetra” in sitemap.xml?
Desambra 25, 2011 amin'ny 12:25 aho
Mba araho ny torolalana ao amin'ny FAQ noho ny patching XML-Sitemap
Desambra 14, 2011 amin'ny 2:29 am
Misaotra ny fanavaozana. Ahoana no ahafahako miova dropdown ny sainam-pirenena? Tsy eo amin'ny FAQ ny. Iza Fi no hanova?
Desambra 14, 2011 amin'ny 2:46 am
Tsy mila ny FAQ, mahatakatra fotsiny ianao tsy maintsy mifidy ny araka ny tokony ho Widget tarehiny eo amin'ny tarehy / Widgets voalaza.
Desambra 14, 2011 amin'ny 3:19 am
Fa ny ny inbedded ao amin'ny lohapejy Tsy ampiasaina amin'ny Widgets toy ny niteraka olana eo anoloan'ny. Ahoana no ahafahako miova ny sainam-pirenena tamin'ity tranga ity? Misaotra
Desambra 14, 2011 amin'ny 4:13 am
Raha ny marina izany no hita ao amin'ny FAQ, ovay ny lohapejy mifanaraka
Desambra 14, 2011 amin'ny 9:38 am
About sainam-pirenena Widget, no ahafantaranao izany no flagged ho lasa miadana kokoa pejy hafainganam-pandeha ( Google SEO )
fa na iza na iza afaka miasa ny vaovao farany 'ity faritry ny fehezan-dalàna ?
jereo ny Pikantsary avy amin'ny Google tatitra ( sorry for the bad looking url 🙂 ) :
Desambra 14, 2011 amin'ny 10:02 am
Misy roa Widgets, miaraka sy tsy misy CSS sprites, raha tianao ho haingana iray, mampiasa ny CSS Version
Desambra 15, 2011 amin'ny 12:08 aho
Tss, I m ny adala, Tsy fahalalana hoe inona no ny 2 Widgets, ankehitriny ny Google pejy haingana ho an'ny http://www.obviousidea.com nitsangana velona avy 86/100 amin'ny 92/100 miaraka ihany izany fiovana !!! tsy mampino !
fa momba izay ihany, isika transposh-baovao amin'izao andro izao sy ny WordPress 3.3 and you can see it works 🙂
Desambra 21, 2011 amin'ny 6:45 aho
Manana fanontaniana roa. Voalohany, no afaka ny olona mba handika ny pejy amin'ny alalan'ny transposh. Ny tiako ho lazaina fa namana ny marina nandika / manova azy ireo fa mbola mampiasa ny transposh Widget?
Faharoa, Aho manana olana miaraka amin'ny FB toy ny Plugin dia toa ho nanangana ny portogey sainam-pirenena avy amin'ny transposh tahaka ny Thumbnail ny olona ny rindrin'ny Facebook. Fantatrao ve na inona na inona momba izany, na raha toa ka misy fomba intsony izany mitranga?
Misaotra noho ny fotoana, izany foana ny tena nankasitraka.
Desambra 25, 2011 amin'ny 12:28 aho
Fa ny olana voalohany, afaka manome ny namana mandrakariva ny fitantarana eo amin'ny toerana amin'ny mpandika teny alalana, Mino aho fa izany dia hanao izay tianao.
Momba ny zavatra faharoa, Tsy fantatro fa ny plugin, Mazava ho azy fa ny tsara indrindra ny zavatra ianao dia mamorona tapakila ho antsika eo amin'ny fampandrosoana mpizara, ary izahay hanatrika ny azy ara-potoana.
Desambra 28, 2011 amin'ny 12:10 am
Hi, Aho lehibe 404 Tsy Hita sy iresahana endrika Google Web Master Tools, Tsy hita(24,206)‎, Iresahana(21,368)‎ . Tsy mampiseho isan'andro. Ary ny visittor sy ny fandaharana ao amin'ny Google mitete be dia be.
Mba kevitra aho mafana hamahana ity olana ity. Dia misaotra be dia be noho ny fanampiana.
Janoary 6, 2012 amin'ny 1:18 aho
Ampiasao ny fifandraisana sy handefa teny kely santionan-angon-drakitra ary ho hitantsika izay azontsika atao.
Janoary 4, 2012 amin'ny 8:44 am
Na kasainao hampifanaraka transposh ny phpbb3 maotera?
Janoary 4, 2012 amin'ny 8:50 am
Eny, dia nomanina, te-hanampy?
Janoary 4, 2012 amin'ny 10:43 am
Eny, Te-hanampy, nefa tsy mahafantatra ny fomba. Aho tsy Fi rindrambaiko.
Janoary 6, 2012 amin'ny 1:15 aho
This is a good new year resolution 😉 learn some php programming while working on this project. Ho faly aho mba hampisambotra anao ho tanana etsy sy eroa.
Janoary 8, 2012 amin'ny 9:32 aho
Hi, Aho Te-vaovao farany fotsiny ny olana sy ny voafaritra.
1. I nampiasa Google (XML) Sitemaps Generator 4.0b8 Beta, Ny fitomboan'ny Index pejy be dia be.
2. I nanova W3 Total Cache ho Quick Cache, izay pampiasana ho an'ny 3 taona. Quick Cache tsara noho W3TC amin'ny teny hoe ny hafainganam-pandeha sy ny mandika haingana (noho W3TC). Hamarino amin'ny alalan'ny Google Webmaster Tools – Nandady stats fa rehefa mampiasa W3TC, Time lany misintona ny pejy nitombo ny 2000ms avy <200MS, ankehitriny ny hampihena rehefa nivadika ny Quick Cache. Ho ahy izany plugin mety amin'ny Transposh.
3. 404 tsy hita mbola manana olana. Dia manara-maso 3-4 andro raha tsy hampihena, Manontany anareo Aho indray.
Janoary 8, 2012 amin'ny 10:01 aho
Yossawat, Mahay mandefa ny rohy avy amin'ny tranonkala na pejy, Te-hijery, Nampiasa tanteraka aho W3 cache sy transposh ny tenako, liana mba hahitana izay mety ho olana.
Janoary 8, 2012 amin'ny 6:49 am
Misaotra betsaka anareo Fabrice Meuwissen, Ankehitriny dia nisolo W3TC ny Quick Cache.
Janoary 8, 2012 amin'ny 8:11 am
no Quick cache famohana azy koa ny CDN tahaka an'i Amazon S3 & rahona aloha ?
Lars Erik Morin milaza
Janoary 10, 2012 amin'ny 4:53 aho
Ny fandikan-teny dia tanteraka fanompoana mahatsikaiky. Angamba izany mampihomehy kokoa ny teny avy amin'ny teny anglisy ho Anarana iombonana, satria Swede rehetra izay no liana amin'ny amin'ny “Nadika” toerana no mahalala kokoa noho ny teny anglisy “fanompoana” mahalala ny soedoa. Ny mpamaky mihomehy na frown, ny hany zavatra dia tsy atao dia ny hahatakatra.
Janoary 10, 2012 amin'ny 11:30 aho
Tena tsy azo antoka aho hoe nahoana no nekena fanehoan-kevitra ity, fa tsy tena tsara na javatra. Inona no azoko lazaina dia hoe ianao mety tena marina, fandikan-teny mandeha ho azy no vokatra vokatra izay diso, ary indraindray aza vazivazy, Na izany aza izany no antony Transposh misy, mba hahafahanao mampiasa ny kely fandikan-teny Ovay rohy eto ambany ny Widget mba tena hanamboarana azy ary ataovy tsara kokoa, dia azo antoka mitempo fihazonana roa mitovy dika mitovy ny votoaty, ary dia tsara noho ny fandikan-teny mandeha ho azy.
Saingy tena, tsy voatery mampiasa izany…
Janoary 16, 2012 amin'ny 3:06 aho
Salama, voalohany izay rehetra tiako ny plugin!
Faharoa, Mila fanampiana kely raha azo atao. Ny toerana dia ahitana ny samy hafa fiteny sy ny Default teny dia teny Anglisy. Rehefa Switch to fiteny hafa ankoatra ny teny anglisy ny plugin handika tsy tapaka ny zavatra rehetra. Ny olana dia tiako ny plugin handika na dia ny Default teny (Anglisy) no nametraka, satria eo amin'ny asa fanaovan-gazety Buddy tsy ny rehetra ny ampy ihany no teny. Ny zavatra rehetra dia miasa tsara amin'ny fiteny rehetra, fa ny Default. Manantena aho fa mazava aho, raha tsy afaka hijery ny toerana faceboooh.com.
Janoary 16, 2012 amin'ny 9:53 am
Izaho koa manana olana izany, ary efa nilaza izany (ary teo amin'ny mailaka fifandraisana amin'ny Ofer) aloha ihany koa.
Angamba ny manaraka dia hanampy Ofer? Vao haingana aho no nametraka WP-FB-AutoConnect, ary na inona na inona nataoko, Foana aho mahazo ny pejy web izay voalaza, “Aza miditra mivantana soratra ity.” Amin'ny alalan'ny be volo-manongotra, Hitako fa plugin raha ny marina no hiditra ahy niditra ny toerana amin'ny alalan'ny kaonty FB ahy; na izany aza, Aho fa tsy ho nahodiny ny ny toerana ny Homepage. Ny developer Nanome toky ahy fa tokony hiasa.
Izany, Nitodika aho eny plugin rehetra ary nanomboka activating azy tsirairay. Ny hany izay tsy namela WP-FB-AutoConnect dia nanatsoaka hevitra araka ny tokony ho i Transposh. Izany no tena ahiana ho amin'ny FB plugin developer izay nilaza fa tsy ny fotoana voalohany fa efa nilaza taminy ny Transposh.
TSY mandondòna aho Transposh. Mihevitra aho fa ny mahatahotra plugin. Toa anao, Mila ary tena, tena maniry izany mba hiasa ho an'ny Buddypress toerana. Antenaina, kely io ny vaovao dia hanampy.
Janoary 18, 2012 amin'ny 4:29 aho
Hi Quint, Misaotra noho ny fanehoan-kevitra. Mihitsy aho no nanana ny olana amin'ny WP-FB fiara hifandray sy Rehefa avy nilaza ny developer niafara aho tamin'ny farany nandao WP-FB sy hosoloany Social-Connect. Tena Te-hitandrina Transposh izay tiako izany ary manantena aho fa misy olona eto Afaka manome fanampiana kely ho antsika.
Febroary 10, 2012 amin'ny 6:35 aho
Tanteraka nanantena fa ianao milaza amiko fa izany no olana ivelan'ny Transposh, fa Mba azonao raha kely indrindra mba jereo kely ity tsipika avy amin'ny fahadisoany vatan-kazo? Izahay vao mahazo anankiray amin'ireny faharoa rehetra.
[09-Feb-2012 14:39:05] PHP Fampitandremana: Miezaka ny hanome fananan'ny ny tsy zavatra ao /home/apexwpa2/public_html/wp-content/plugins/transposh-translation-filter-for-wordpress/core/parser.php amin'ny tsipika 656
Febroary 10, 2012 amin'ny 11:56 am
Tsy fantatro hoe nahoana no mitranga, Bet tsara indrindra dia ny hanafoanana ny fahadisoana fotsiny mampiasa ny @ Fi toromarika
Febroary 10, 2012 amin'ny 12:18 am
I voafafa be dia be ny lahatsoratra avy amin'ny bilaogy.
Nihevitra aho fa ny haben'ny latabatra sy ny Translation translationlog nihena, Fa fantatro fa tsy.
Heveriko fa misy ankavia fandikan-teny ao amin'ny banky angona tsy misy ilàna azy.
Misy fomba iray hanafoana ireo sy hampihenana ny banky angona?
P. S.: plugin io lehibe!
Febroary 10, 2012 amin'ny 11:46 am
Na dia tsy mino fa ny haben'ny zava-dehibe ny banky angona betsaka eto amin'ity tontolo fampiantranoana, dia mety tokoa ho fahendrena ny manao ny sasany amin'ny toe-javatra cleanups, eo amin'ny toerana pejy, Izaho dia manoro hevitra anao hanaisotra izay rehetra teny Auto zokiko 14 andro, aza manahy be very raha misy fiara fandikan-teny nampiasaina toy ny tokony ho indray anyhow.
Febroary 10, 2012 amin'ny 2:29 am
Ny namana no nanova ny fandikan-teny toy ny tsy fantatra anarana. Izy dia tsy tafiditra ao ny Dashboard. Ny fandikan-teny ireo eo rehefa tafiditra ao aho, fa raha vao miditra avy aho tsy teo izy ireo. Misy ny toerana na boaty mba hijerena izay tsy maintsy manaiky izy ireo, na hahatonga azy ireo ho velona? Aho ambanin'ny fahatsapana fa na iza na iza afaka manova sy hamoaka ny fandikan-teny? Ny torohevitra ho be dia be tahaka ny amin'ny mandrakariva nankasitraka.
Febroary 10, 2012 amin'ny 11:44 am
Mety manana plugin caching izay tsy ho namelombelona, izany no tsara indrindra Bet eto
Febroary 10, 2012 amin'ny 11:47 am
Misaotra manolotra! Manana W3TC, Raha fantatrao ny misy olana fa mahatonga amin'ny Transposh, Ampahafantaro ahy azafady.
Febroary 11, 2012 amin'ny 3:10 am
Kilemaina aho ny TP_ENABLE_CACHE in constants.php (niova ho diso) ary voafafa cache (WP Super cache) Fa mbola mitoetra ny olana. Tokony hanampy transposh.js aho mba nandà mpampiasa mpiasa?
Lars Rönnbäck milaza
Febroary 19, 2012 amin'ny 10:25 aho
Manana olana roa. Voalohany, Aho nanao sonia ho an'ny Bing Zavatra API ao amin'ny Windows Azure tsena sy kopia ny tantara manan-danja ho any amin'ny MSN API saha manan-danja ao amin'ny Transposh Settings. Nino izany aho dia ataovy azo atao ny mampiasa fandikan-teny malalaka natolotra ny 2 tapitrisa endri-tsoratra. Na izany aza, na inona na inona vokany nadika. Rehefa tsindrio ny “Dikanteny rehetra izao” bokotra izany fotoana fotsiny avy rehefa afaka dimy fikasana.
Faharoa, ny PopUp varavarankely izay fandikan-teny aho hanova tanana toa manana ambany Z-Index danja. Menus sy ny sary hita eo an-tampony izany, Koa dia sarotra ny mampiasa. Ny foto-kevitra aho dia mampiasa “Roapolo Eleven 1.3”, izay tsy tokony ho ny vahiny, mihevitra fa izany no nitranga tamin'ny ekipa WordPress.
Febroary 20, 2012 amin'ny 11:17 aho
Mety efa tsy nadika ny API manan-danja noho ny Bing araka ny tokony ho, ary ianao dia mahazo ny tsy manan-kery AppID, anyhow – amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra izany dia tsy ilaina ny mampiasa azy io amin'ny rehetra, afaka miala ny saha fotsiny banga.
Momba ny Z-fanondroana, Heveriko ianao marina, ary izany dia ho raikitra amin'ny ho avy dikan-
Febroary 20, 2012 amin'ny 4:21 am
Dia niditra ny API manan-danja satria nihevitra aho fa tsy maintsy. Manana olana toy izany koa raha manala ny fanalahidy, amin'ny “Translation tsy feno” ary timeout rehefa afaka dimy fikasana, na miaraka amin'ny Google sy Bing. Niezaka reinstalling, manala ny teny mandeha ho azy, ary manindry ny vahaolana fahadisoana teo aloha dikan-bokotra. Na izany aza tsy misy Mandehana. Mihazakazaka foana aho Transposh nandritra ny fotoana ela.
Misaotra noho ny manamboatra ny Z-fanondroana ao amin'ny manaraka dikan!
Febroary 21, 2012 amin'ny 8:21 aho
Google Translate tsy hiasa eo amin'ny toerana satria tsy ampy ny trano famakiam-boky Curl fanohanana eo amin'ny mpizara, MSN raha ny marina no asa, ary hitako bibikely kely hita eo amin'ny fifantenana ny toerana misy anao maotera, manana fomba roa manamboatra izany ankehitriny – iray – hametraka Curl, ary ny roa, mifidy Bing toy ny toerana misy anao navigateur eo amin'ny toe-javatra pejy.
Mba hiaro ahy nalefa tamin'ny fomba fiasan'izy
Febroary 21, 2012 amin'ny 5:17 am
Misaotra indrindra anao! Ny tsotra 'mahay-mahazo hametraka php5-Curl’ did the trick 🙂
Martsa 4, 2012 amin'ny 10:13 am
Efa nametraka izany dikan-Transposh farany momba ahy namany Sary (www.duttotech.com) fa ny voadika fiteny anglisy sy italianina tsy indexed amin'ny Google…
no tsy maintsy manova misy toerana ho an'ny izany?
Aprily 29, 2012 amin'ny 12:22 aho
Toa ahy, indraindray Google mandray izany fotoana, Aho hahita teny anglisy pejy ny toerana ho indexed ny ankehitriny…